Waxqabadka Ku Soo Kordhinta Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Waxqabadka hagaajinta ee Photoshop
Sida aan u qaabeyno Waxqabadka Photoshop waxay si toos ah noo saameynaysaa shaqadeena maalinlaha ah.
Marar badan ayaan iska indhatirnaa inaan waqti yar ku qaadanno si aan u dhisno goobo ku habboon oo ku habboon mashiinkeenna iyo baahiyaheenna.
Maqaalkan kooban waxaan kaga hadlayaa hagaajinta waxqabadka ee Photoshop.
Markii aan la shaqeyneyno dukumiinti aad u culus ama sawirro xallin sare leh, waxaan u maleyneynaa in Photoshop uu ka yara culus yahay sidii caadiga ahayd. Aan aragno qaar ka mid ah tilmaamaha lagu hagaajinayo waxqabadka barnaamijka sida ugu macquulsan.
Qeybta hoose ee barnaamijka waxaan ka helnaa menu leh ikhtiyaarro badan. Haddii aan furno adigoo gujinaya fallaarta yar, waxaan arki doonnaa «Waxtarka«.
Qiimaha 100% wuxuu muujinayaa in Photoshop uu si hufan u shaqeynayo. Haddii xogtan ay ka yar tahay 100%, waxay noo sheegaysaa inay tahay inaan kordhinno RAM-ka uu Photoshop u baahan yahay.
Haddii aan galno guddiyada dookhyada (amarka k ama ctrl k) oo aan gujino tabta Waxqabadka, waxaan ka heli doonnaa xulashooyinka "Xusuusta Isticmaalka" kuwa kale. Halkan waxaan ugu qoondeyn karnaa xusuusta RAM-ka Photoshop si waxqabadkiisu u sarreeyo.
Hoos u sii deg waxaan leenahay "xoqitaanno cajalado." Waxaa si aad ah loogu talinayaa in la isticmaalo a disk Memory disk ka duwan midka barnaamijyada iyo Operating System-ka lagu rakibo. Haddii aan suurta gal nahay, diskiga SSD-ka ah ayaa fikrad fiican ah in loo isticmaalo sidii xusuusta dalwaddii, wax si weyn u kordhin doona waxqabadka Photoshop.
Ku rakibidda Photoshop disk adag oo adag (SSD) ayaa u oggolaanaya Photoshop in ay dhaqso u bilaabaan, malaha wax ka yar ilbiriqsi. Laakiin xawaaraha dhaqsaha badan ayaa ah waqtiga kaliya ee aad ka faa'iideysato. Waa waqtiga keliya ee xog badan laga akhriyo SSD-ka.
Si aad uga faa iideysato SSD, u isticmaal sidii disk xoq. Isticmaalka diskkaan sida disk xoqan ah wuxuu ku siinayaa horumar wax ku ool ah haddii aad leedahay sawirro aan si buuxda ugu habboonayn RAM. Tusaale ahaan, kala beddelashada qaybaha u dhexeeya RAM iyo SSD ayaa aad uga dhakhso badan qaybaha kala beddelashada u dhexeeya RAM iyo drive-ka adag.
Qeybta "Taariikhda iyo keydka" waxay na siineysaa fursado dhowr ah. Waxay kuxirantahay sida aan u isticmaalno, xulashooyinka qaar ayaa noofiicnaan doona anaga ama kuwa kale. Ka shaqeynta qaabeynta websaydhka tusaale ahaan, qiyamka "asalka" ayaa faa'iido yeelan doona. Dhinaca kale, haddii aan ku shaqeyno dukumiinti aad u ballaaran laakiin leh dhowr lakab, waxaa fiican in la doorto "Weyn oo fidsan".
Nambarka sheekada sidoo kale saameyn ayuu ku yeelanayaa waxqabadka, maadaama sheeko yar ay sheegeyso inay yartahay isticmaalka Photoshop.
Masawir kasta ama xaalad sheeko kasta oo ka mid ah galka Taariikhda waxay kordhisaa xaddiga xoqidda goobta bannaan ee Photoshop adeegsado. Markasta oo pixels badan hawlgalku isbadalo, ayaa meesha ugu badan ee xasuusta dalwadalka ah ay sheeko u dhigantaa cunaysaa.
Ugu dambeyntiina guddigan waxaan ku haynaa qaabeynta qalabka wax lagu sawiro. Goobaha horumarsan waxaan ka helnaa seddex qaab sawir. Waa arrin la isku dayo in mid kasta oo iyaga ka mid ah la doorto midda ugu habboon innaga. Si kastaba ha noqotee, haddii aan haysanno kombiyuutar duug ah ama aan aad u yareynin, waxaa lagugula talinayaa inaad iska baarto sanduuqa sanduuqa wax sawira. Qaabkan waxaan ku ogaan doonnaa xoogaa faseexnaan badan marka aan barnaamijka isticmaaleyno.
Waxaan sidoo kale keydin karnaa xusuusta RAM-ka adoo galaya menu-ka «Qoraalka» -> «cabirka aragtida Font» -> Midna. Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay haddii aan haysanno boqolaal nooc oo rakibay (laguma talinayo, taasi waa nooca maareeyayaasha loogu talagalay).
Waxa intaa dheer waxa lagu sifeeyey illaa hadda, waa waxtar in la xidho dukumiintiyada u furan tabsada aan haysanno laakiin aan isticmaalin. Sidan oo kale waxaan sidoo kale ku heli doonnaa xusuusta dalban waxaanan ogaan doonnaa in Photoshop uu noqdo mid fudud.
Talada ugu dambeysa ee la soo saaro ka hor intaan la dhammayn, tanna waa in loo adeegsadaa sida caadiga ah, waa in la faaruqiyaa xusuusta uu Photoshop ku jiray intii lagu guda jiray falalka qaarkood. Tan waxaa lagu gaaraa halka ay ku yaalliin liiska «Wax ka beddel -> Nadiifi ->« dhammaan ». Sidan ayaan ku nadiifineynaa xusuusta muuqaalka ah oo aan ku faaruqineynaa, waxaanna uga tagnaa diyaargarowga Photoshop si uu u sii wado howlaha cusub
Haddii aan raacno faahfaahintaas yar, waxaan ogaan doonnaa in Photoshop uu u dhaqmo si ka fiican maalinba maalinta ka dambeysa waana iska ilaalin doonnaa dhibaatooyinka waxqabadka marka aan la shaqeyneyno barnaamijka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Waxqabadka hagaajinta ee Photoshop